ဆေးရုံစုတ်ယူခြင်းယန္တရား Vaccum Pump စနစ်ကုန်ကျစရိတ် China Manufacturer
Hunan Eter Electronic Medical Project Stock Co., Ltd. [Hunan,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Middle East ထုတ်ကုန်:11% - 20% Cert:ISO13485, ISO9001, OHSAS18001, ASME, CE ဖေါ်ပြချက်:ဆေးရုံစုတ်ယူခြင်းယန္တရား,ဆေးရုံ Vaccum Pump စနစ်,ဆေးရုံ Vaccum Pump စနစ်ကုန်ကျစရိတ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာစနစ် > ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုစက်ရုံ > ဆေးရုံစုတ်ယူခြင်းယန္တရား Vaccum Pump စနစ်ကုန်ကျစရိတ်
1. ETR ဆေးရုံစုတ်ယူခြင်းယန္တရား Vaccum Pump စနစ်ကုန်ကျစရိတ်ဖျေါပွခကျြ
အဆိုပါဆေးဘက် compressed လေကြောင်းစနစ်လေကြောင်းရန် Compressor, ယေဘုယျ filter ကို, aftercooler, တိကျ filter ကို, ကာလဖြစ်ပါသည်လေကြောင်းလေမှုတ်စက်, လေကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့, activated ကာဗွန် filter ကို, ချုံ့လေထုအရည်အသွေးကိုမော်နီတာ, Decompressor, အဆို့ရှင်, ပိုက်လိုင်းနှင့် terminal ကိုပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါစနစ်, တစ်ဦးလေကြောင်းတွန်းမှတဆင့်ချုံ့လေကြောင်းထုတ်ပေးထားတဲ့ထိစိမ့်လေမှုတ်စက် filter ကိုယူနစ်မှတဆင့်ချုံ့လေထုထဲတွင်အညစ်အကြေး, ရေနံခိုးအငွေ့နှင့်အစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပေး, လေထုသိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့မှလေကယ်တင်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အတွက် terminal ကိုပစ္စည်းကိရိယာများမှတစ်ဦးပိုက်လိုင်းကနေတဆင့်ဖြန့်ဖြူး အခန်းပြန်လည်သက်သာလာခြင်းနှင့် decompress ပြီးနောက်အခြားအအတွင်းလူနာရပ်ကွက်။
2.ETR ဆေးရုံစုတ်ယူခြင်းယန္တရား Vaccum Pump စနစ်ကုန်ကျစရိတ် အားသာချက်
ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာ 2.Reduced ပစ္စည်းကိရိယာများပျက်ကွက်ကြိမ်နှုန်း,
3.Controlled အစိုဓာတ်ကို content တွေကိုမြင့်မားဘေးကင်းလုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိ
3 ။ ETR ဆေးရုံစုတ်ယူခြင်းယန္တရား Vaccum Pump စနစ်ကုန်ကျစရိတ်အလုပ်အခြေခံမူ
4. ETRHospital စုတ်ယူခြင်းယန္တရား Vaccum Pump စနစ်ကုန်ကျစရိတ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
4.1 Air ကိုကွန်ပအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
4.2 ကာလဖြစ်ပါသည် Air လေကြောင်းလိုင်းခြောက်စက်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
4.3 Compressed Air ကို Filter ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
4.4 Compressed Air ကိုသိုလှောင် Tank အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာစနစ် > ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကိုစက်ရုံ
ဆေးရုံ Vaccum Pump စနစ်
ဆေးရုံစုတ်ယူခြင်းယန္တရား ဆေးရုံ Vaccum Pump စနစ် ဆေးရုံ Vaccum Pump စနစ်ကုန်ကျစရိတ် ဆေးရုံစုတ်ယူခြင်းပစ္စည်း ဆေးရုံစုတ်ယူခြင်းယူနစ် ဆေးရုံအောက်ဆီဂျင်ယန္တရား လေဟာနယ်စုတ်ယူခြင်းပစ္စည်း လေဟာနယ်စုတ်ယူခြင်းစက်စျေး